Nuxurka Digniin Ay Hay'adda Caafimaadka Adduunku Ka Soo Saartay Daawashada Carruurta Ee Telefeeshinnada Koombuyuutarada Iwm - Waadinews | Somali News and Entertainments | Waadinews | Somali News and Entertainments
May 18, 2019 | Published by: khadar
Hay’adda Caafimaadka Adduunka (WHO) ayaa sheegtay in ayna habboonayn in ubadka yaryar loo fasaxin in ay si iskood ah u daawadaan Shaahadaha Tv-yada, Koombuyuutarada IWM. Hay’adda ayaa hoosta ka xariiqday in aan gabi ahaanba ilmo da’diisu ka yartahay 2 sannadood loo lago daawashada Telefeeshanka, iyo Koombuyuutarada. WHO ayaa sidoo kale tibaaxday in ubadka da’doodu u dhaxayso 2 ilaa 4 sanno aanay shaashadaha isticmaalin wax kabadan saacad kali ah maalintii. Talooyinka Hay’adda Caafimaadka Adduunka ayaa salka ku haya saamaynta taban ee ay Shaahaduhu ku yeelanayaan ubadka taas oo ah in dhaqdhaqaaq la’aatu horseed karto dhimasho iyo xanuunada ka dhasha cayilaadda.
Waa markii kowaad ee ay hay’addani soo saarto talooyin la xidhiidha dhaqdhaqaaqa Jidhka iyo hab-dhaqannada horseeda wahsiga iyo hurdada gaar ahaan carruurta ka yar 5 jir. Hay’adda caafimaadka adduunka ayaa sidoo kale ku talisay in aanay carruurtu muddo hal saac ka badan ku fadhiyin gawaadhida lagu ciyaarsiiyo IWM halkii marba. Tallooyin la xidhiidh da’da Ubadka iyo hab-dhaqankooda: B) Ilmaha Gu’ jir ka yar: 1-Waa in uu maalintii dhawr jeer sameeyaa dhaqdhaqaaq jidheedh. 2- Gebi ahaanba waa inuu daawan Telefishan, Kombuuter, Mobil IWM. 3-Guud ahaan 24-kii saacadood waa in la seexiyaa 14 ilaa 17 saacadood. 4-Waa in aan gaadhiga ciyaarta lagu xidhin wax kabadan hal saac markiiba.
T) Gu’ jir ilaa 2 jir: 1- Waa in uu maalintaa muddo saddex saac ah ciyaaraa. 2- ilmaha gu’ jirka ah waa in aanu gebi ahaanba TV daawan, halka ilmaha laba jirka ahna loo ogol yahay wax saacad ka yar. 3- Waan la seexiyaa 11 ilaa 14 saacadood Maalintii (24-kii Saacadood). 3- Waa in aanu fadhiga ku raagin muddo dheer. J) Ilmaha da’diisu u dhaxayso 3 ilaa 4 jir: 1-Waa inuu ciyaaraa ugu yaar 3 saacadood maalintii. 2-Waa in uu seexdaa inta u dhaxaysa 10 ilaa 13 saacadood. 3- Waa in aanu fadhiga ku raagin muddo dheer.